Bullypit: Ko iyo American Bulldog Pitbull inosanganisa yako mhando imbwa? - Inobereka
Kana iwe uchitsvaga rudzi rwunogona kuve inonakidza gadhi imbwa, wadii kuve nemubatanidzwa wevaviri? Iyo American Bulldog Pitbull musanganiswa, inozivikanwawo se Bullypit , ingangove iyo canine iwe yauri kutsvaga.
Uku kuyambuka kunogona kutaridzika kutyisidzira, asi ivo vanokanganisa iwe, kungave kunge chipfuwo kana ivo vachiri kuita sembwa yekurinda kana senherera.
Unoda rumwe ruzivo nezve Bullypit?
Chii chinonzi Bullypit?
Iyo inotyisa uye inotyisa yeAmerican Bulldog Pitbull musanganiswa
Temperament: Chii chinonzi Pitbull Bulldog musanganiswa senge?
Kuchengeta American Bulldog Pitbull musanganiswa
Vanodheerera vane hutano here?
Ndingawane kupi Bullypit mbwanana dziri kutengeswa?
Unofanirwa here kutora American Bulldog Pitbull musanganiswa?
Imbwa dzekugadzira dzavepo kwenguva, asi vamwe vanoti iyo American Bulldog Pitbull musanganiswa pamwe yakatanga kutanga mumakore makumi matatu apfuura kana zvakadaro.
Nekudaro, kutibatsira kuti tinzwisise zvakati wandei nezve rudzi urwu rwakavhenganiswa uye kuziva zvatinotarisira maererano nechitarisiko chavo nehunhu, zvakafanira kuti utarise zvakanyanya kune mumwe nemumwe wevabereki vepachena.
Inodzivirira yeAmerican Bulldog
Iyo American Bulldog
Nehurombo, mazhinji emarudzi anodheerera ane nhoroondo yakaoma, iyo yakafanana kune iyo American Bulldog . Aya madzishe e canines madzitateguru eChirungu akarerwa kumabheya mabheya uye nzombe kusvika kuma1835 apo tsika iyi inotyisa yakarambidzwa.
Nekudaro, ivo vaive vachiri vakatongerwa sezvo kurambidzwa kwaingoreva kuti tarisiro yakatendeukira mukucheresa imbwa idzi dzekurwa imbwa.
Nekuda kwekuzvarwa sembwa dzinorwa, imbwa idzi dzaive kukurudzirwa kuva nehasha , uye hunhu hwavo hwekushinga hwakaita kuti Bulldog inyatsoita basa iro raidiwa nevanhu ivavo.
Gare gare imbwa idzi dzakaunzwa kuAmerica nevatorwa, uye nekuda kwekuvimbika kwavo, kushinga, vakagadzwa kuti vashande vachichengetedza zvivakwa uye mitambo yekuvhima mumapurazi. MuHondo Yenyika II, iyo American Bulldog mhando dzakapotsa dzatsakatika.
Stocky uye mhasuru , American Bulldog ine hunyanzvi hwemitambo uye inozivikanwa kusvetuka tsoka nhanhatu kana kupfuura mudenga. Iwo anowanzo kumira 20 kusvika 28 inches (50 kusvika 70cm) akareba uye anorema pakati pe60 uye 120 mapaundi (27 kusvika 54 kg).
Pane mhando dzakawanda yeAmerican Bulldog, kusanganisira iyo Johnson mhando (inonziwo iyo Anodheerera kana Yakajeka ), iyo yakakura, yakakura, uye yemhasuru ine chipfuva chakafara.
Kune zvekare mhando yeScott (inonziwo iyo Standard kana Kuita ), Iyo iine yakareba, yakapfava, inowedzera mitambo. Iwe unogona zvakare kuwana mahybrids emhando mbiri dzakasiyana dzeAmerican Bulldog.
Iyo American Pitbull Terrier
Zvinosuruvarisa, iyo American Pitbull Terrier ine nhoroondo yakafanana zvikuru neiyo yeAmerican Bulldog. Rudzi urwu rwakashandiswa zvakare kubheya uye kubhejera nzombe uye gare gare kurwisa imbwa.
Nekuda kweizvozvo, iyi purebred yakawana mukurumbira wekuve nenjodzi, uye ndizvo zvisiri pamutemo kuva neyako mune dzimwe nzvimbo, kwete muU.S. chete, asi kutenderera pasirese.
IAmerican Pitbull inowanzo kanganiswa ne American Staffordshire Terrier . IAmerican Kennel Club (AKC) yakapa iyo imbwa iri zita muma1930 mukuyedza kuyedza kupatsanura rudzi kubva kumakomba aro ekurwa.
Nekuda kweizvozvo, Pittie iyi haizivikanwe neAKC seyayo yega mhando. Nekudaro, vanhu vazhinji vanobvumirana kuti izvo zviviri zvakasiyana neiyo Staffordshire Terrier idiki zvishoma.
Izvi imbwa dzine simba kumira wakakomberedza 17 kusvika 19 inches (43 kusvika 48 cm) kureba pabendekete uye uremu huri pakati pe30 uye 85 makirogiramu (14 kusvika 38 kg). Vane musoro wakafara, wakapamhama une nzeve diki, shaya yakafara, ine simba, uye muswe mupfupi, wakanangana.
Jasi ravo pfupi, rakatsetseka rakasiyana nemuvara asi kazhinji rinouya mumhando mbiri, dzinonzi Bhuruu Mhuno Pitbull uye iyo Mutsvuku Mhuno Pitbull .
Seizvo zita rinoratidzira, iyo yebhuruu-ine misiyano ine greyish kana marasha-ane ruvara mhino uye jasi, nepo tsvuku-isina-Pitbull ine mhino yepinki ine mhangura-yerudzi.
Kunyangwe hazvo Bully Pit ichiita senge inotyisa kune vamwe, mukanwa wayo unoseka uye nekunyemwerera kwayo kunogona kuita kuti iite kunge imbwa yako iri kunyemwerera kwauri.
Iyo Bulldog Pitbull musanganiswa kazhinji ine muviri wakasimba nebhokisi rakafara, musana wakasimba, tsoka dzakakura, uye makumbo etsandanyama.
Ivo vane yakafara uye yakati sandara musoro ine pfupi muromo, uye floppy kana rosebud nzeve. Miswe yawo inogona kunge yakareba uye yakatetepa.
Kuti ndikupe zano riri nani rekuti musanganiswa weAmerican Bulldog Pitbull ungaratidzika sei, tarisa vhidhiyo iyi:
Yakakura sei iyo American Bulldog Pitbull musanganiswa inowana?
Kuyambuka American Bulldog neAmerican Pitbull Terrier kunoguma ne pakati nepakati pakakura imbwa inomira paavhareji kureba kwe 20 kusvika ku24 inches (50 kusvika 60 cm) uye inorema pakati Makirogiramu makumi mana nemakumi masere (18 ne36 kg).
Nekuda kwehukuru hwayo hukuru, iyo PitbullBulldog haIYAKANAKA kukodzera hupenyu hwemafurati uye ingangoenderana nehupenyu hwepapurazi kana, kana zvirinani, imba ine hombe, yakakomberedzwa-muyadhi umo imbwa inogona kutenderera.
Jasi reAmerican Bulldog Pitbull musanganiswa
Kunyangwe hanzu yeAmerican Bulldog Pitbull musanganiswa ipfupi, yakanaka, uye yakatetepa, rudzi urwu rwuri kwete hypoallergenic uye nekudaro zvaisazokodzera zvakanaka kuvanhu vane allergies.
Rudzi rwePitbull, ingave yebhuruu-isina kana tsvuku-yemhino, inokanganisa kutaridzika uye ruvara rweBullypit pup.
Zvichienderana nevabereki vayo, iyo American Bulldog Pitbull musanganiswa puppy inogona kuuya mumarudzi akasiyana siyana senge dema, tan, tsvuku, yero, grey, goridhe, kirimu uye chena.
mabviro : American Bulldog Tsvuku Mhuno Pitbull musanganiswa
Iyo American Bulldog Pitbull ndeye inodzivirira zvakanyanya imbwa asi icharatidza a hunhu hunhu kana kushamwaridzana uye kudzidziswa uchiri mbwanana.
Kudzidzisa Bullypit mbwanana kunogona kutanga pakutanga masvondo masere ekuberekwa . Kuita izvi kuchaita kuti fido iyi ive nehunhu hwakanaka.
Iva wakagadzirira kumatambudziko anonetsa kana akaomarara ekudzidzisa. Nekuda kwehunhu hwavo hukuru, husingashiviriri, ivo vachada ruoko rwakasimba uye muridzi akazvipira.
Izvo zvakanaka kuve neruzivo kana uchibata nerudzi urwu nekuti kana iri nguva yako yekutanga kuve nembwa, iyo Bullypit inogona kuzviona.
Usakanganwa kuti kusimbiswa kwakanaka kwakakosha paunenge uchidzidzisa chero imbwa, ingave iri yakachena kana yambuka.
American Bulldog Pitbull musanganiswa inogona zvakare kungwarira nevasingazive uye dzimwe imbwa. Nezvo zvataurwa, vanogona kunge vane maitiro ekurwisa , kunyanya nezvipfuwo zvidiki. Nhoroondo yeiyi canine yevabereki inogona zvakare kutora chinzvimbo mune izvi.
Kufanana neese yakanaka wachi , Bullypits inofarira kuhukura uye inoenderana nebasa racho. Kana ukadzidziswa uye ukabatwa nenzira kwayo, iwe unogona kutarisira yakanyanya inotapira fur buddy kubva parudzi urwu. Naivowo imbwa dzakangwara zvikuru dzinoda kutariswa uye kunakidzwa.
Unogona kutarisa kuti akangwara sei muAmerican Pitbull ari muvhidhiyo iyi, apo mumwe ari kudzidziswa kugara, kusiya, uye kutora:
Zvishoma zvezvinhu zvekuisa mupfungwa kana zvasvika pakuva nerudzi urwu - nekuda kwejasi ravo rakatetepa, ichi chakayambuka hachifambire zvakanaka munzvimbo dzinodziya kana kutonhora.
Huru hwavo hwehuswa hahupi hunopa dziviriro yakawanda uye zvinotoreva kuti Bulldog Pitbull inokanganisa kupisa kwezuva uye inoda kushandisa sunscreen!
Yakawanda sei kurovedza muviri iyo fido inoda?
Iyi yemasanganiswa inoshanda chaizvo, uye kanenge 90 maminetsi ekurovedza muviri zuva nezuva . Kuva parwendo kunobatsira imbwa iyi kugara yakazvibata uye ichivaraidzwa.
Ndokusaka tinovakurudzira kumhuri dzinoshingairira dzinonakidzwa nekupedza nguva vari panze uye kutora yavo canine shamwari kumhanya, kumhanya, uye kukwira.
Zvekusimudzira pfungwa, kuvhima pfuma, kana kuviga & kutsvaga kweyavanofarira toy kana kurapwa chiitiko chikuru.
Ingoshanyira iyo doggy park kana yako Bullypit yakadzidziswa uye kushamwaridzana. Iwe unofanirwa kuve wakangwarira kana iwe uchirega yako pooch ichitamba nedzimwe imbwa, saka usamusiya asina anotarisirwa .
Kudyisa yako American Pitbull
Bullypits inofanirwa kupihwa zvirinani 2 ½ kusvika 4 makapu Chikafu chembwa zuva rega rega, chakakamurwa kuita matatu kusvika mana kudya. Izvo zvinobatsira kudzivirira gastric torsion, inova yakajairika asi yakaoma mamiriro mune akakura marudzi.
Uku kuyambuka kunobatsira zvakanyanya kubva kune yepamusoro mhando yakaoma imbwa chikafu ine yakaderera-zviyo zvemukati sezvo zviyo zvinogona kukonzera allergies. Inofanira zvakare kuve yakakwira munyama uye Omega 3 fatty acids kukudziridza mapfupa akasimba nekusimbisa mhasuru.
Kudya kwakapfuma mukati chondroitin kana glucosamine chisarudzo chakanaka chekuchengetedza mapfupa emhuka yako ane hutano uye kudzivirira chero chinogona kusangana chirwere.
Kana iwe uine nguva uye bhajeti yekudyisa yako canine pal mbishi chikafu, izvo zvingave zvakanaka, futi! Kungofanana naBenzo nechikafu chine moyo ichi.
Ingo ita chokwadi chekuti chikafu chaunopa imbwa yako chinoenderana nezera rake, saizi, danho rekuita, uye hutano.
Izvo zvekushambidzira zvinodiwa zveAmerican Bulldog Pitbull musanganiswa ndizvo yakaderera kusvika pakuenzanisa . Kukwesha kunongodiwa kanokwana kaviri pasvondo - kunze kwemwaka wekudururwa kwepamusoro panodiwa kukwesha zuva nezuva.
Mupei pekugezesa chete pazvinenge zvakakodzera, senge paanosviba kana kunhuwa. Kupukuta iyo Bulldog Pitbull kusanganisa neine nyoro yekuwachira rinokwana kumuchenesa uye kubvisa chero rakasununguka bvudzi.
Mazino ayo anofanirwa kukweshwa kaviri kana katatu pasvondo, nepo nzara dzinofanira kudimburwa kana dzikanyanya kureba kana kuzviona dzichirovera pasi. Nzeve dzinogonawo kuongororwa nekupukutwa zvakachena vhiki nevhiki.
Rudzi rwakasimba rwakavhenganiswa rweAmerican Bulldog uye Pitbull zvinoguma nemuchinjikwa unogona kuva neupenyu hwese hwe Makore gumi kusvika gumi nematatu . Zvakadaro, mahybridi anogona kugara nhaka mamwe ematambudziko ehutano ayo vabereki vavo vakarerekera.
Shamwari yeChirungu yeAmerican Bulldog inozivikanwa nezvirwere zvakati wandei zvakadai sehudyu dysplasia, iyo inozivikanwa muimbwa dzine makumbo mapfupi.
Tarisa pane kuchengetedza hurumende yekurovedza muviri uye chikafu chinowedzerwa icho chinobatsira kudzivirira izvi muBullypit yako.
Nekuda kwemhino yavo pfupi, mbwanana yako inogona zvakare kukura Brachycephaly Mhepo Inodzivirira Syndrome , izvo zvinogona kukonzeresa zvakanyanya kufema.
Iyo jasi-rimwe chete jasi remubereki wePitbull rinoitawo kuti rudzi urwu ruve nehutachiona.
Zvimwe zvirwere zvakajairika zvinogona kukanganisa musanganiswa weAmerican Bulldog Pitbull hypothyroidism , chirwere chemwoyo, matambudziko emaziso, uye kudzedzereka kwekuhotsira.
Kutenda tekinoroji, unogona kuwana anowanikwa madhiza online! Kana iwe uri kufunga nezvekuwana iyo American Bulldog Pitbull musanganiswa wembwanana, unogona kutarisira kuti vabhadhare pakati $ 250 uye $ 2,000 .
Mutengo weBullypit unoenderana nezvinhu zvakaita senzvimbo yemuberekesi, mukurumbira wekennel, ropa reropa revabereki, uye kuwanikwa kwevana.
Iwe zvakare unofanirwa kufunga nezve iyo avhareji pagore mari , uye zvakajairwa zvikwereti zvekurapa. Mari dzepagore dzekurapa dzinogona kubva pamadhora mazana mana nemakumi mashanu nemashanu kusvika mazana matanhatu emadhora Zvino zvimwe zvekushandisa zvingangoita pakati pe $ 510 ne $ 650 gore rega.
American Bulldog Pitbull sanganisa vafudzi
Paunenge uchitsvaga yako yakakwana Bullypit mbwanana, yakawanda pfungwa uye hanya zvinofanirwa kupinda mukuyedza kutsvaga muberekesi akanaka.
Kubereka kusinei nebasa kweAmerican Pitbull uye American Bulldog kunogona kukonzera imbwa ine hukasha.
Edza kudzivirira kutenga ichi chemasanganiswa kubva kuchitoro chezvipfuyo kana nzvimbo dzausina chokwadi chekuti maitiro ekuberekesa ane hunhu akateedzerwa.
Kutanga kutsvaga kwako kweAmerican Bulldog Pitbull musanganiswa wembwanana, tsvaga vafudzi vanoita hunyanzvi muPitbull kana Bulldog musanganiswa, senge Hustle Line maKennels muMemphis, TN.
Iwe unogona zvakare kutarisa zvemagariro enhau maakaundi, seizvi Facebook peji , kwaungawana American Bulldog Pitbull sanganisa vana vari kutengeswa. Kune zvakare misika inopa Pitbull musanganiswa uye American Bully musanganiswa.
Nekuda kwehunhu hwerudzi urwu, iwe unogona kazhinji kuwana iyo American Bulldog Pitbull musanganiswa kumatumba iwe aunogona kutora kana kudzosera imba.
Zvichienderana nezvakaitika kare, kununurwa kweichi chakayambuka kungangoda nguva yakawanda uye kuzvipira maererano nedzidzo, resocialization, uye kurovedza muviri. Mamwe masangano ekununura anoita imbwa dzinodzidzisa dzinogara navo, saka ichi chinhu chaunogona kubvunza pekugara.
Heano dzimwe nzvimbo kwaunogona kutanga kutsvaga kwako kweBulldog Pitbull yekutora:
Shaw Pitbull Kununura (Columbus, MS)
Rap yakaipa (Oakland, CA)
Mid-America Vanodzvinyirira Vanobereka Kununura (Kansas City, MO)
Fresno Bully Kununura (Sanger, CA)
Bulldog Kirabhu yeAmerica ine kununura network uko kwavanopa rondedzero yemasangano uye imbwa dzinogona kutorwa nedunhu.
Rudzi urwu, nepo isiri mhuka inokodzera munhu wese, inoratidza kuvimbika kwakasimba kuvanhu vayo vandinoda.
Iyo inodzivirira, yakasimba, uye ine simba hunhu hweiyo Bullypit inovaita ivo vanokodzera kwazvo kune vanoshanda uye vane ruzivo varidzi vembwa avo vanoda kuisa nguva yekudzidziswa, kurovedza, uye kufambidzana imbwa yavo.
Kana iwe uri muridzi wevacheche, iwe unogona kuwana iyi yakasanganiswa mhando kuva yakanyanyisa kuomesa, ine hukasha, uye inonetsa kudzora.
Chii chaunogona kutaura nezve iyi imbwa dhizaini? Iwe une American Bulldog Pitbull musanganiswa? Goverana nyaya yako nesu nekupindura pazasi!
Iyo Cockapoo: Iyo imbwa yakakunakira iwe?
Australia Mufudzi Lab Musanganiswa - An Aussiedor Muridzi Gwara
chii chinonzi texas heeler
sei imbwa dzichinanzva tsoka dzadzo usiku
puppy uremu Calculator yakasanganiswa rudzi
german shepherd uye lab yakasanganiswa